Herisetra ara-pananahana :: Fatina tovovavy voafono tao an-tranom-bazaha • AoRaha
Herisetra ara-pananahana Fatina tovovavy voafono tao an-tranom-bazaha
Razana tovovavy iray, 20 taona, efa voafono no novantanin’ireo zandary avy eny Talatamaty tao amin’ny tranona Frantsay iray teny Ambohibao, afak’omaly. Vokatry ny herisetra arapananahana no nahafaty an’itsy tovovavy, araka ny fizahana nataon’ny mpitsabo. Tombanana ho telo andro lasa talohan’izao nahitana azy izao no nanaperana ny ainy, hoy ny fanampimbaovao.
Nosamborin’ireo zandary avy hatrany ilay vahiny tompon-trano, izay fantatra fa sakaizan’ilay namoy ny ainy ihany ary ahiana ho nahavanon-doza. Voatazona eny amin’ny tobim-paritry ny Zandarimaria eny Talatamaty izy. Voalaza ho efa nanana ny tantara tsy dia mazava tany aloha tany izy, araka ny tsiliantsofina. “Nampandre ny masoivoho Frantsay momba ny zava-misy izahay, indrindra momba ny fananany saingy tsy nanome valin-teny hentitra izy ireo noho ny filazana ny fananany laza ratsy tany aloha ”, hoy ny loharanombaovao akaiky ny mpanao famotorana.
Nahitan’ny mpitandro ny filaminana an’irony fitaovana ara-pananahana artifisialy karazany maro irony tao an-tranon’itsy vahiny ahiana ho nahavanon-doza itsy. “Nihosindra teo amin’ ny fandriana iray sady nikorontana. Nisy basim-borona iray miaraka amin’ny bala maromaro ihany koa hita tao anatin’ny trano. Lavaka vao nohadiana tazana teo an-tokotany no ahiana saika handevenana ny razana”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Nanambady vehivavy malagasy hafa ara-dalàna sady niterahany mianadahy, 12 sy 14 taona itsy teratany frantsay itsy. Nisaraka izy mivady rehefa nanana olana, roa taona mahery lasa izay. Nipetraka tao amin’ny rainy izy mianadahy, avy eo. Nalain’ny reniny ireo zaza ireo rehefa voarohirohy sy voasambotry ny zandary ny rainy.
“Raha ny fahenoanay azy dia mpanampy an’itsy teratany vahiny itsy io tovovavy io sady sakaizany. Misy loharanom-baovao nilaza taminay fa mitady olona hiaraka aminy handeha hanary ny razana any Toamasina ilay vazaha. Nanome toromarika ahafahana misava ny trano ny Fampanoavana, izay nahitana an’ireo zavatra samihafa ireo ”, hoy hatrany ireo mpitandro filaminana.
Voina teny Tsaralalana :: Mpiasa nianjera avy teny amin’ny rihana voalohany
Ady amin’ny halatr’omby :: Dahalo roa maty voatifitra tany Ankilizato